दाङमा निषेधाज्ञा लागू, सरकारी कार्यालय र बैंकसमेत बन्द – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर दाङमा निषेधाज्ञा लागू, सरकारी कार्यालय र बैंकसमेत बन्द
१७ वैशाख, काठमाडौं । दाङ जिल्लामा शुक्रबार बिहानबाट निषेधाज्ञा लागू भएको छ । वैशाख १७ गते विहान ६ बजेदेखि वैशाख २५ गते साँझ ६ बजसेसम्म दाङ जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
कपिलवस्तुमा १ हप्ता निषेधाज्ञा थप, के-केमा भयो खुकुलो ?
उपत्यकामा एक हप्ता निषेधाज्ञा थपिएपछि के-केमा खुकुलो भयो ?
प्रधानमन्त्रीद्वारा रुपन्देहीको सिमरहवामा लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास
काठमाडौं उपत्यकामा थप एक साता निषेधाज्ञा : होटेल रेष्टुरेष्टलाई टेकअवेको..
थप १ हजार ६९४ मा कोरोना पुष्टि, ३ हजार ९९४ जना संक्रमणमुक्त